Madaxweynaha Maamulka Puntland oo joojiyey doorashooyinkii golaha deegaanada Puntland ilaa amar dambe – idalenews.com
Madaxweynaha Maamulka Puntland oo joojiyey doorashooyinkii golaha deegaanada Puntland ilaa amar dambe
Warsaxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa lagu sheegay in la joojiyey Doorashooyinkii la qorsheenayey inay ka dhacaan deegaanada Puntland maalinimada beri ah ee 15ka July.
Go’aankan ayaa ka danbeeyey kadib markii magaalooyin badan oo kamid ah Puntland laga diiday doorashada xukuumada Madaxweyne Faroole wado, waxaana qeybo kamid ah gobalada Puntland maanta lagu gubay sanaadiikhda doorashada.
Dhinaca kale dagaal ka dhacay saaka magaalada Qardho ayey ku dhinteen ugu yaraan 5 qof oo ay ku jiraan Askar iyo rayid, waxaana magaaladaasi lagu gubay sidoo kale sanaadiikhdii halkaasi la geeyey.
Warsaxaafadeedka kasoo baxay xafiiska Madaxweyne Faroole ayaa lagu sheegay inuu wadatashi la sameeyey Madaxweyne kuxigeenka Puntland iyo Golaha Wasiirada oo dhamaan kamid ah Xisbiga uu hogaamiyo ee Horsed ayuu ku sheegay inay joojiyeen doorashadii la waday kadib markii ay arkeen marxalada Puntland ay xiligan ku jirto.
Warsaxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in kooxo Argagaxiso ah, waa sida hadalka loo dhigayee iyo kuwo kale oo nabad diid ah isu aruursadeen khal khal gelinta amniga Puntland, arrintan oo kasii careysiisay qaar badan oo kamid ah dadkii shacabka ahaa ee maanta ka qeyb qaatay mudaharaadyada ay dadka ku dhinteen.
Horey ayey u jireen digniino kasoo baxayay Nabadoonada iyo Waxgaradka Puntland oo dowlada looga digayey waxyaabihii maanta dhacay, arrintaasi oo ay dowlada horey dhegaha ka xiratay, balse warar ku dhaw dhaw Madaxtooyada ayaa sheegaya in dowlada ku talo galeysay rabshado in ay dhacaan si Beesha caalamka loo tuso diidmada xoogan ee looga soo horjeedo Barnaamijka dimuquraadiyeynta oo ay Beesha Caalamka dhaqaalo badan kusiisay dowlada Puntland ee xilka heysa.
Waxaase nasiib xumo lagu tilmaamay in doorashadan lagu beegay bil Ramadaan iyadoo la og yahay xiisadaha kasoo socday arrimaha Doorashooyinka oo si weyn la isugu heystay qaabka ay dowlada u hirgelisay.
Hoos ka akhriso Warsaxaafadeedkii Madaxweynaha Puntland
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiraxman Maxamad Maxamud Farole, markuu si qotodheer ah ula tashaday Madaxweyne ku xigeenka, Gudoomiyaha Golaha Wakiilada, Golaha
Wasiirada iyo xubnaha Guddiga Nabadgelyada Dowladda Puntland, Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka KMG ah, iyo dad xurmo ku leh Bulshada Rayidka ah, wuxuu soo saaray go’aankaan ku saabsan joojinta Doorashooyinka Golayaasha Deegaanka, oo ka dhici lahaa
Puntland berri Isniin July 15, 2013.
Markuu qiimeeyey mas’uuliyadda iyo xilka weyn ee ka saaran ilaalinta amniga, xasiloonidda, iyo midnimada dadka Reer Puntland;
Markuu arkay kooxo isu soo bahaystay khalkhalgelinta degenaanshaha iyo waxyeeleynta midnimada Puntland, kuwaasoo ay ka mid yihiin argagaxiso doonaya inay si xun uga faa’idaystaan qabsoomidda Doorashada Golayaasha Deegaanka Puntland;
Markuu aqoonsaday dadaalkii dheeraa oo Puntland usoo gashay hirgalinta iyo meelmarinta nidaamka doorashooyinka iyo axsaabta badan, iyadoo tallaaboyin badan oo lagu guulaystay la
soo maray ilaa hadeer;
Markuu qiimeeyey qaswadayaasha gudaha iyo khalkhalgeliyaasha dibedda oo maalgelin iyo abaabul uga qaybgalaya abuurida xasilooni-darro iyo isku dhac xilliga doorashada Puntland;
Markuu aqoonsaday khatar ku imaan karta amniga, nabadgelyada iyo xasiloonidda dadka Reer Puntland;
Markuu qiimeeyey himilooyinka dadka Reer Puntland ee dowlad-wanaaga, nabadda, iyo cadaaladda;
Dowladda Puntland waxay si rasmi ah u joojisay Doorashooyinka Golayaasha Deegaanka Puntland oo qabsoomi lahaa July 15. Iyadoo la qaatay go’aankaan adag, Dowladda Puntland waxay shacabka usoo jeedinaysaa mahadnaq balaaran niyadda ay u hayaan una muujiyeen in
geedi-socodka nidaamka doorashooyinka socdo, waxayna Dowladdu dadka u balanqaadaysaa inay weli ku taagan tahay mowqifkeeda ahaa sidii loo hormarinlahaa nidaamka doorashooyinka iyo axsaabta badan, doorashada-na la qaban doono wakhtiga ku habboon, inshallah.
Dowladda Puntland waxay u mahadcelinaysaa Beesha Caalamka oo soo taageertay nidaamkaan muddo 10-sanno ku dhowaad ah, marxalado badan oo lagu guulaystay lasoo martay Dowladda ilaa wakhtigaan xaadirka ah. Dowladda Puntland waxay kalsooni ku qabtaa in Beesha Caalamka ka taageeri doonto sii wadida nidaamka asxaabta mustaqbalka.
Dowladda Puntland waxay ugu yeeraysaa dadka Reer Puntland oo nabadda jecel iyo Ciidamada Amniga inay daafacaan Midnimadooda, Amnigooda.